Hogaamiyaasha Mucaaradka Soomaaliya oo Kismaayo gaaray & Hadaladii ugu xiisaha badnaa ee ay sheegeen.
KISMAAYO(P-TIMES) – Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir oo dhamaantood mucaarad ku ah Xukuumadda Faderaalka ee hadda xukunka haysa ayaa gaaray magaalada Kismaayo, halkaas oo ay u tageen Caleema-saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), waxaana lagu soo dhaweeyey madaarka Kismaayo.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa aroornimadii maanta soo dhaweeyey dhigiisa Puntland oo ahaa qofkii ugu horeeyey ee duulimaad toos ah maalmahan ku yimaada magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland.
Madaxweynayaashii hore ayaa soo gaaray Kismaayo, inkastoo ay kala dambeeyeen, haddana madaxda oo siyaabo kala duwan u hadlay ayaa sheegay in geedi socodka dalka ay waajib tahay in loo hogaansamo.
Xassan Sheekh ayaa sheegay in dawladnimadu ay ku jirto in horey loo socdo, wuxuuna cadeeyey in waxyaabaha dhacaya oo dhan ay tahay in cashar laga barto oo laga gudbo, sidaas oo kale Jubbaland ayuu sheegay in ay adkeysi ka qaaday talaabooyinka lagu soo rogay ee dheeraadka ahaa.
Madaxweynijii Shariif Sheekh Axmed ayaa dhankiisa cadeeyey in dawladnimada Soomaaliya ay tahay wax waqti dheer loo soo maray, ayna rajeynayaan in la garowsan doono dhibka ay leedahay in dalkaan dib loogu cesho maalmo xanuun badan oo uu kasoo gudbay.